China Set nke 3 White Cube Wall Shelves Mmepụta na Factory |SS Osisi
Ahịa na-ekpo ọkụ
Shelves na-ese n'elu mmiri
Akwa akpụkpọ ụkwụ
ỤSỊ NA EGWU
Rustic Kitchen Wall Shelf w ...
Oche nchekwa na akwa akpụkpọ ụkwụ
Set nke 3 U na-ese n'elu mmiri ...
Tọọ ọtụtụ ọrụ dị nkenke 4...
Nhazi nke 3 White Cube Wall Shelves
Tinye mmasị na nha anya na igbe igbe onyinyo na-ese n'elu mmiri!
Ụdị na-ezute ọrụ mgbe ọ na-ebuli ụkwụ SQUARE efu!Ihe SS OsisiNa-ese n'elu mmiriCubeShelves zuru oke maka igosipụta ihe ngosi mara mma, ihe ịchọ mma na ihe ndị ọzọ dị oke ọnụ ahịa.Nhazi udi square ahụ na-egosi osisi faux nke nwere ezigbo matte mejuputara.N'iji anya dị ntakịrị dị ọcha, setịpụ a na-agbakwụnye àgwà n'ime ime ọgbara ọhụrụ ma ọ bụ omenala ọ bụla.Enwere ike itinye setịpụ shelf nke ukwuu ebe ọ bụla!Jupụta oghere mgbidi tọgbọrọ chakoo n'elu tebụl, ebe ọkụ, ụzọ mbata, ihe efu, n'etiti windo, na ndị ọzọ.Kọọrọ naanị dị ka otu unit ma ọ bụ jikọta ya na ụdị ndị ọzọ sitere naSS OsisiNchịkọta Shelf na-ese n'elu mmiri.
Ụdị No.: MO616
Akụkụ: 25 x 9 x 25H cm
20 x 9 x 20H cm
15 x 9 x 15H cm
Akụrụngwa: MDF(Ọkara njupụta Fiberboard)
Mechaa: PVC, Melamine ma ọ bụ akwụkwọ
Nbudata kacha: 2kg (4.45lbs)
Rustic ma dị ugbu a
● ONYE NA-EKWU SQUARE na-ese n'elu mmiri (Nhazi nke 3, Ọcha): Gosipụta ihe ngosi mara mma, ihe ịchọ mma na ihe ndị ọzọ dị oke ọnụ mgbe ị na-enye ebe nchekwa na-arụ ọrụ nke nwere ihe ngosi ihe n'ụdị square.. Melite ihe ndozi ma jupụta oghere mgbidi efu n'elu tebụl, ebe a na-ere ọkụ, ụzọ mbata, ihe efu, n'etiti windo na ọtụtụ ndị ọzọ..
● Nwepụ Oghere: Igbe igbe na-ese n'elu na-eburu ihe efu square ụkwụ. Wepụta ohere site n'ụzọ okike iji belata nhụsianya ma gosipụta ihe ndozi na obere ma ọ bụ nnukwu mpaghara. Nye echiche nke ohere ka ukwuu n'ime ụlọ studio gị, ụlọ ezumike ma ọ bụ obere ebe obibi. Megharịa ngwa ngwa ka ọ dabara mkpa gị.
● Icho mma na ihe ngosi: Tinye agwa na ikpo ọkụ n'ime ime ụlọ ọgbara ọhụrụ ma ọ bụ ọdịnala ọ bụla. Gosipụta mkpokọta akụ gị yana otu cubes ọnụ maka ihe ngosi mara mma. Tinye n'akụkụ n'akụkụ maka anya dị ọcha. Kpọgidere iche n'ime ọnụ ụlọ dị iche iche maka nkọwa aghụghọ nke ihe ncheta.
● N'ụzọ dị iche iche & na-arụ ọrụ: Wụnye n'ime ime ụlọ ma ọ bụ ụlọ ịsa ahụ iji jide ngwaahịa n'ime ite, tinye n'ọnụ ụzọ mbata, ma ọ bụ gosi ụdị foto ezinụlọ n'ime ogologo paseeji.. Ngosipụta obere trophies na nkwanye ugwu n'akụkụ ebe ọkụ, ihe ndozi ekeresimesi, jiri na kichin jide ngwa nri na ite..
● Ọ dị mfe itinye: Ejiri osisi faux mara mma nke nwere ezigbo matte rụchara. Na-ejikọta ya na mgbidi na-enweghị nkwado a na-ahụ anya. Achọrọ mgbakọ nta. AKWỤKWỌ KWESỊRỊ ngwaike. Jiri akwa kpọrọ nkụ hichaa dị ọcha. Nhazi nke shelf square 3, na nha dị iche iche, A na-atụ ihe dịka: Nnukwu9,85”, Ọkara7.88”, na obere5.90" square inch (Omimi ime, site n'ihu ruo azụ bụ 3.50")
Gaa na mgbidi ma gbanwee ihe onwunwe gị dị oke ọnụ ka ọ bụrụ mkparịta ụka n'ezie.
Shelf na-ese n'elu mmiri bụ ihe nka dị ka ọ bụ nchekwa bara uru.Mepụta mkparịta ụka n'ime ime ụlọ site n'ịchịkọta ha ọnụ n'akụkụ ọkụ ma ọ bụ n'etiti windo abụọ iji gosipụta ihe osise, trophies, wdg. Revamp mgbidi ụlọ ịsa ahụ mgbe ị na-egosipụta ihe dị mkpa nke ụlọ mposi, kandụl, ma ọ bụ okooko osisi ọhụrụ iji mepụta spa-dị ka mgbagha.Gosipụta ụdị gallery foto ezinụlọ na paseeji dị ogologo ma ọ bụ mee ka kichin gị sie nri iji jide ụtọ, ngwa nri na ite.Ntọala square a na-enyekwa nnukwu onyinye maka mgbidi ọ bụla nwere oghere, ọkachasị n'ụlọ ọhụrụ, ụlọ mbụ, ma ọ bụ oghere ọfịs!
Hazie ma gosipụta obere ihe kachasị amasị gị site na iji ihe siri ike nke dị mfe ịwụnye.
Ihe shelf ndị a nwere ụdị cube na-ese n'elu mmiri bụ osisi faux mara mma nwere ọmarịcha matte.Ha na-ejikọta ya na mgbidi na-enweghị nkwado a na-ahụ anya ma dị mfe ịwụnye na obere mgbakọ chọrọ.AKWỤKWỌ ngwaike.Jiri akwa kpọrọ nkụ hichaa ngwa ngwa.(Nhazi nke 3, n'ụdị nha dị iche iche) Ọ na-atụ ihe dịka: 9.85 ", 7.88", na 5.90" inch square.
Kedu ihe kpatara ịhọrọ ngwaahịa osisi SS?
Akụkọ nke Shelves na-ese n'elu mgbidi
Nke gara aga: Ntọala nke 3 U na-ese n'elu mgbidi mgbidi
Osote: 3-Tier Industrial Grey Sofa tebụl maka ntinye
Shelf na-ese n'elu ọcha 24-inch set nke 2
Ntọala nke 3 U na-ese n'elu mgbidi mgbidi
Obodo Shiting, Xiangcheng District, Zhangzhou, Fujian, China